Ozinina vokatra - Mpanamboatra vokatra any Sina, mpamatsy
Raha laharam-pahamehana ny fanoherana ny hamandoana, jereo ny plywood an-dranomasina.Ity karazana ity dia mampiasa adhesive tsara indrindra ary vita amin'ny fenitra avo indrindra.
Avo kalitaon'ny Furniture Grade Melamine (Synchorized) plywood
1 lanja maivana, fahamarinan-toerana avo, tsy misy rano.
2-mahatohitra, anti-cracking, avo harafesina fanoherana.
3 malefaka surface, avo lenta amin'ny fisaka.
4 feno fepetra manokana natao manokana.
5 lafo vidy, manome toky aorian'ny fivarotana.
6. hentitra fanaraha-maso kalitao sy matihanina R & D ekipa sy QC ekipa
7.high kilasy fitaovana sy ny kilasy ambony tontolo iainana adhesive
mafana mivarotra melamine plywood avo lenta
Ny plywood Lijun Melamine dia vita amin'ny plywood eucalyptus, plywood poplar na eucalyptus sy poplar plywood combi core, ara-toekarena sy azo ampiharina amin'ny haingon-trano sy fanaka.
Sarimihetsika niatrika plywood dia iray amin'ireo orinasa lehibe products.the Grade avy amin'ny rantsan-tanana jointed fototra ho feno vaovao poplar fototra.
Ny fotoana fampiasana indray dia mety ho in-10-50 araka ny akora samihafa.
Ny fotoana fampiasana indray dia mety ho avy amin'ny 10-50 heny araka ny akora samihafa.
mba jereo ny Lijun sarimihetsika miatrika plywood tombony:
1. Tsy misy wapping, tsy misy tapaka, tsy misy endrika, afaka mijanona 24 ora amin'ny rano mangotraka.
2. Fahombiazana tsara ary fotoana fampiasana bebe kokoa.
3. Mora ny manala ny membrane; Ny fotoana dia 1/7 amin'ny bobongolo vy.
4. Ataovy malama sy tsara tarehy kokoa ny tampon'ny simenitra, mba ho mora ny fanaovana haingon-trano ary koa izany
Melamine Block Joint Ny plywood dia karazana fototra vita amin'ny plywood efa nampiasaina, rehefa avy nanatevin-daharana ny sakana plywood, dia hametahana sosona fanampiny amin'ny veneer vaovao amin'ny lafiny roa amin'ny sakana.Noho izany ny taratasy melamine amin'ny lafiny roa dia ara-toekarena sy azo ampiharina amin'ny haingon-trano sy fanaka
Lijun Melamine plywood dia vita amin'ny plywood eucalyptus, plywood poplar na eucalyptus sy poplar plywood combi fototra, ara-toekarena sy azo ampiharina amin'ny haingon-trano sy fanaka.
Container gorodona plywood dia tena vita amin'ny hazo fingotra fototra sy hazo mafy fototra,
dia ara-toekarena sy azo ampiharina ho an'ny fitoeran'entana board Performance sy ny toetra:
surface: malama ambonin'ny, mora diovina sy anaovan'ireo-mahatohitra
fitaovana: hakitroky matevina, mateza, tsy misy fofona
asa tanana: asa tanana, manapaka tsara sy voajanahary